म मुर्ख हुँ जसले उपेन्द्र यादव र अशोक राई संग पाटी एकता गरे डा.बाबुराम भट्टराई – Life Nepali
म मुर्ख हुँ जसले उपेन्द्र यादव र अशोक राई संग पाटी एकता गरे डा.बाबुराम भट्टराई
काठमाडौँ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले उन्नत समाजवादी लोकतन्त्र आफूहरुको प्रमुख एजेण्डा भएको बताएका छन् । समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा लिखित ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’ नामक पुस्तकको विमोचन समारोहमा उनले सुसम्पन्न मुलुक निर्माणका लागि उन्नत समाजवादी लोकतन्त्रमा जानुपर्ने बताए ।
तस्विरमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई ।
यस्तै उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले कोही नहुनेको राज्य नै अभिभावक हुने खालको आफूहरुले समाजवादी लोकतन्त्रको कल्पना गरेको बताए । उनले भने, ‘काठमाडौँ दिनभरी कागज–बोतल उठाउने बालबालिका साँझ सडकमै सुतेको भेटिन्छन् । कोही नहुनेको त राज्य हुनुपर्छ नि ? समाजवादी लोकतन्त्रमा कोही नहुनेको राज्य अभिभाव हुन्छ । जसलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ ।’
उनले दुई तिहाइ नागरिकलाई राज्यले बहिस्करण गरेकाले मुलुक दरिद्र भएको टिप्पणी गरे । यस्तै समजवादीका वरिष्ठ नेता अशोक राइले काँग्रेस र कम्युनिस्टले सोच्न नचाहेको विषयबाट आफूहरु केही दिन खोजिरहेको बताए । समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले शासकले तल्लो तहमा अधिकार दिने कुरामा आफ्नो बाऊको सम्पत्ति दिनु परे जस्तो गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘प्रदेशलाई राज्य भन्न मिल्दैन भन्ने गरिएको छ । नेपालका शासकले तल्लो तहलाई अधिकार दिने कुरामा आफ्नो बाऊको सम्पत्ति दिनपरे जस्तो गर्छन् ।’ कार्यक्रममा नेकपाका नेता दिनानाथ शर्माले उपेन्द्र यादवलगायतलाई नेकपामा फर्किन सुझाव दिए । शर्माले यादव माओवादीले थालेको जनयुद्धका बेला पार्टीमा बौद्धिक नेताका रुपमा सक्रिय रहेको स्मरण गरे ।
उनले भने, ‘वैचारिक रुपमा हामी एउटै धरातलमा छौं । समाजवादी लोकतन्त्रको विकास गर्ने धरातलमा हामी उभिएका छौं । हाम्रो सबैको समाजवाद निर्माण गर्ने भन्ने अभियान हो।’ विचार मिल्न गएमा सबै कुनै दिन एक ठाउँमा हुन सक्ने शर्माको भनाइ छ । ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’माथि राजनीतिक विश्लेकष डा. सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विज्ञ कृष्ण हाछेथु, डा. मुक्ति रिजाल र डा. हरिवंश झालगायतले टिप्पणी राखेका थिए ।
Previous हामिलाई अरुको एक इन्च जमिन पनि चाहिएन ,नेपालकाे एक इन्च पनि जमिन छोड्न सक्दैनौं- प्रचण्ड
Next भीम रावललाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी !